Qala iincwadi Autovía del Mediterráneo
26. Septemba 2018
Autovía del Mediterráneo, Cover, media media, 2018
Igosa liwela emkhombeni, lenzakaliswe, uhlala kude afike oogxa bakhe. Okwangoku, ufumana uhlobo lwembali olumgangatho osemhlabeni oye washiya ixesha elide.
Idoli labantu, izithuthi kunye nezinto eziqokelelwa kwiminyaka emashumi.
Uninzi lwamaxhoba lusekho iminyaka.
Ngubani odale idodo lomuntu?
Iqela lephandi laseSpain nelaseJamani liqala kwiTenerife ukuzingela ngokugqithisileyo.
Ulwaphulaphulo kwi-1. Ngo-Meyi 2020 apha kwisitolo
Inqaku langaphambiliAbathengisi baseHamburg St. Pauli
Inqaku elilandelayoIziganeko zeNkundla ezivela eU.SA